E jidere ndị njem nlegharị anya Russia na Turkey maka ịmalite ọkụ ọhịa Antalya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » E jidere ndị njem nlegharị anya Russia na Turkey maka ịmalite ọkụ ọhịa Antalya
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
E jidere ndị njem nlegharị anya Russia na Turkey maka ịmalite ọkụ ọhịa.
A na-enyo ndị na-eme njem na Rọshịa enyo na ha na-agbanye ọkụ n'amaghị ama nke dara n'akụkụ ebe ndị njem nlegharị anya Turkey na-ewu ewu.
Ọ pụrụ ịbụ na ndị njem nlegharị anya Rọshịa bụ́ ndị na-eme njem n'okporo ụzọ a ma ama malitere ịmalite ọkụ ọhịa.
A nwụchiri ndị njem nlegharị anya Rọshịa n'oge a na-eme nyocha nke ọnọdụ ihe merenụ.
A chụpụrụ ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ Turkey ka ha na-alụ ọgụ ọkụ n'oge okpomọkụ nke afọ a.
Na Mọnde, ndị uwe ojii Turkey nwụchiri otu ndị njem nlegharị anya Russia na Antalya, mgbe a kọchara ọkụ na-agba n'ime oke ọhịa dị n'ime ime obodo.
Dị ka ndị mmanye iwu obodo si kwuo, a na-enyo ụmụ amaala Russia asaa enyo na ha malitere ọkụ ọkụ n'amaghị ama nke dara n'akụkụ ebe ndị njem na-ewu ewu.
Ndị ọchịchị obodo na mpaghara Çağlarca na-ekwu na ọkụ Satọdee nwere ike ịbụ na ọ bụ ọkụ ọgbụgba nke otu ndị njem nlegharị anya Russia na-aga n'okporo ụzọ Lycian a ma ama.
Dị ka onye na-ekwuchitere ndị ọrụ diplomatic Russia na Antalya, Ụlọikpe ahụ mere mkpebi iji jide ndị njem nleta Russia n'oge nyocha tupu ikpe ikpe nke ọnọdụ nke ihe ahụ merenụ.
E jidere mmadụ isii ọzọ na toro toro n'August, n'enyo enyo na ọ ga-agbanye ọkụ n'ime ọhịa, oge a maka ebubo ịgba ọkụ. Ndị uwe ojii kwesịrị ịbata n'ezie iji chebe ndị a na-enyo enyo, bụ ndị ndị obodo iwe na-achụbu.
E jidere mmadụ atọ ọzọ na Bodrum ka ndị uwe ojii kwuru na a nwụdere ha ka ha na-atụpụ isi sịga na windo ụgbọ ala ka ha na-anya ụgbọ ala n'akụkụ oke ọhịa.
A chụpụrụ ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ Turkey ruo oke n'oge okpomọkụ na-alụ ọgụ ọkụ, ọtụtụ n'ime ha na-eyi ebe ndị njem nlegharị anya na-ewu ewu na Antalya na Mugla.
Ihe dị ka 107 toro toro ọkụ chọrọ usoro ihe mberede site n'aka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ. Ọtụtụ narị mmadụ merụrụ ahụ n'ihi ọkụ na-agbasa ma chụpụrụ ọtụtụ puku mmadụ n'ụlọ ha.